HERINANDRO MASINA 2017: Alarobia 12/04/2017 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAROBIA)
Antsoina hoe “ALAROBIA FITSONGOANA DIA” na “ANDRO MANGINA” ity Alarobia ity satria tsy misy zavatra firy voasoratra mikasika izay nataon’i Jesosy tamin’ity andro ity ao amin’ny filazantsara efatra. Na dia izany aza anefa dia azo inoana fa maro ireo asa nataon’i Jesosy sy ny mpianany satria nanomana ny Paska izy ireo.
Ny tena azo antoka fa niseho tamin’ity Alarobia ity dia ny namadihan’i Jodasy an’i Jesosy tamin’ny alalan’ny vola madinika 30. Samy manana ny fitantarany ity tranga ity ny filazantsara synoptika (Mat. Mar. Lio). Miavaka kosa ny filazan’i Lioka satria nambarany mazava tsara fa Satana no niditra tao amin’i Jodasy ka nanome saina azy hamadika an’i Jesosy (Lio 22:3).
Amin’i Lioka mantsy dia tonga hanorina ny Fanjakany ao anatin’ny olona i Jesosy ary Satana no fahavalo misakana tsy hahatanteraka izany. Raha tehanorina ny fanjakany ao anatin’ny olona i Jesosy dia tsy maintsy roahany avy ao anatin’ny olona Satana (Lio 4:1-13; 11:14-23). Satana ihany koa no fahavalo misakana ny tsy hahatanterahan’ny Fanjakany ary izy koa no miasa ao anatin’i Jodasy.
I Matio irery no milaza fa vola madinika 30 io namadihan’i Jodasy an’i Jesosy io. Tsy fantatra marina io vola madinika io. Raha “sekely”, izay vola fampiasa tao amin’ny Tempoly io, dia fantatra fa mitentina 4 denarii ny tombambidin’ny sekely iray. Raha izany dia manodidina ny karaman’ny olona iray mandritra ny 120 andro, izany hoe 4 volana, eo ho eo io vola madinika 30 izay namadihan’i Jodasy an’i Jesosy io. Hoatrinona amin’ny vola Malagasy izany hoy ianao? Sarotra ny manombana izany satria miovaova arakaraky ny vanim-potoana ny tombambidin’ny sekely. Na dia izany aza anefa, raha raisintsika ny maha karama efa-bolana azy any Madagasikara dia tokony ho manodidina ny 800 000 Ar–1 000 000 Ar eo ho eo izany (karama ambany no noraisiko).
Notsindrian’i Lioka mazava tsara “iray tamin’ireo roambinifolo” ity Jodasy izay namadika an’i Jesosy ity (Lio 22:3). Iray tamin’ireo apostoly izay novolavolain’i Jesosy isanandro, nampianarina ary nahita fahagagana maro izay nataony no namadika azy. Tapa-kevitra izy fa hanatona ny lohan’ny mpisorona sy ny mpiambina tao amin’ny Tempoly mba hahatanteraka ny famadihany an’i Jesosy (Lio 22:4).
Inona no tena nahatonga an’i Jodasy namadika an’i Jesosy?
Maro no mihevitra fa fitiavam-bola tafahoatra. Marina izany saingy mety nisy antony hafa ara-politika nahatonga izany. Tsara ho fantatsika fa nisy ireo Zelota izay tia tanindrazana mahery fihetsika izay nivoy ny hanafahan’ny Mesia an’Israely avy ao ambany vahohon’ny Romana. Faly izy ireo tamin’ny voalohany raha nahita an’i Jesosy, nefa rehefa nanaraka akaiky ny asa nataony izy ireo dia kivy satria tsy mba nanaratsy na nanohitra ireo miaramila romana i Jesosy fa vao maika aza nampianatra fa tokony hitia ny fahavalo. Izany hevitra izany no nahakivy an’i Jodasy koa ka tiany hajanona amin’ny alalan’ny fisamborana Azy ny asan’i Jesosy.
HAFATRA HO ANTSIKA ANKEHITRINY
Tandremo fa na dia i Mosesy izay nitokisan’Andriamanitra sy nampiasainy ary nahita ireo asa lehibe nataony aza dia tafalatsaka tamin’ny tsy finoana ka tsy navelan’Andriamanitra niditra ny tany nampanantenaina. Hitantsika miharihary eto fa tsy ny maha-pianatr’i Jesosy akory no inona.
Iray tamin’ireo mpianatr’i Jesosy i Jodasy nefa dia tsy nino ary nampiasain’i Satana mba hamadika an’i Jesosy. Afaka mamadika azy na izaho pastora aza rehefa atosiky ny fitiavam-bola sy fitiavam-boninahitra. Zava-dehibe ny vola, saingy tsy ny vola akory no tena mamelona ny Fiangonana fa ny finoana. Mila fitandremana isika mba tsy ho fitiavam-bola no anarahantsika an’i Jesosy na anaovantsika ny asany. Tsy “mpanao fahagagana” akory i Jesosy fa Mpamonjy. Ireo antsointsika hoe fahagagana ireo dia fomba ataony mba hahatonga ny olona hino fotsiny, tsy io no tena ventin-javatra fa ny fiainana mandrakizay izay omeny amin’ny alalan’ny finoana.
Mat 26:14-16; Mar 14:10-11; Lio 22:3-6